Nepali Rajneeti | नेपालका कम्युनिष्टहरु लु’टेरा हुन् : प्रा.डा. उप्रेती
असार १, २०७८ मंगलबार ४७३ पटक हेरिएको
अहिले विभिन्न युबट्युब च्यानलहरुमा प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीका अन्र्तवार्ता खुबै चर्चामा छन् ।
उनले नेपालको एक रहस्य घटना र नेपालका कम्युनिष्टहरुको लगातार पोल खोलिरहेका छन् ।
जननेता मदन भण्डारीसँग आफूले अन्तिमपटक हात मिलाएको दाबी गर्ने प्रा.डा. उप्रेतीले ह’त्या’रा प’त्ता ल’गाउ’न आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । भ’ण्डारीको ह’त्या ‘नै भ’एको उनको दावी छ ।
एक प्रा.डा. ले यसो भनिरहँदा उहाँकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी अहिले मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा आशिन हुनुहुन्छ ।
तर प्रा.डा. उप्रेतीले खुलासा गरेका तथ्यहरुमा स्वतन्त्र छानवीनको कुनै माग भएको छैन । यसले जनस्तरमा त’रंग ल्याएको छ । यसैले की यो सबै बकवास कुरा हुन् भन्नुपर्यो कि त उनका आधारयुक्त कथन भए सत्य तथ्य खोज्नुपर्यो भन्ने उदेश्यले नै यो सामाग्री हामीले पोष्ट गरेका छौ ।
उनका भिडियो यत्रतत्र छन् । केही दिन अघि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले विभिन्न दावी गरे त्यसपछि अहिले हरेक युबट्युब च्यानलमा छाइरहेका छन् ।
उप्रेतीले पो’ष्टमा’र्टम ग’र्नुभ’न्दा अ’घि आफूले भण्डारीसँग हात मिलाएको बताएका छन् । मदन भण्डारीको पो’ष्टमार्ट’म टो’लीको चि’कित्सक आफू रहेको दावी उनको छ ।
उनले भण्डारीको एउटा हात माथि उठेको अवस्थामा रहेको र आफूले नै हात अघि बढाएर मिलाएको स्मरण गराएका छन् । उनले भने “उहाँलाई मा’रे, पो’ष्टमा’र्टम क’मि’टीको ना’ताले मै’ले भ’नेको, उहाँलाई मा’रे, ई’भि’डे’न्स स’बै छ’न् । खो’ज्दै’नन्, यो कु’रा प’क्का भयो ।
खो’लामा हा’ले, त्य’हाँ के के ग’रे ? मा’रे व’रे, त्य’सपछि उ’हाँलाई त्यो पुलभन्दा १३, १४ किलोमिटर उतातिर ल’गेर फा’ले, मा’रिस’केपछि । तीन चार दिनपछि उहाँको श’व भे’टियो । वीर अस्पतालको रिसेप्सन टेबुलमा उ’हाँको श’व ‘छ’, ब’डी छ’ । मृ’त्त श’रि’र ‘छ, मे’रो प्या’रो मान्छेको ।
जसको लागि ‘म म’र्नप’नि’ त’यार थि’एँ । एउटा हात यस्तो गरेर उठेको छ, अर्को हात यसरी छ । (देखाउँदै), त्यो बेलामा मदन भण्डारीले हात बढाउनुभएन क्या मसँग, त्यो बेलामा चाहीँ मैले हात बढाएँ क्या उहाँसँग मिलाउन ।
र, उहाँसँग हात मिलाएँ क्या मैले, उ’हाँलाई ‘चि’र्नुभ’न्दा प’हिले । त्य’सरी हात मिलाउन विश्वमा यदि कोही छ भने मदन भण्डारीसँग, त्यो डा. रामप्रसाद उप्रेती हो ।” उनले ठो’कुवा ग’रे ।
त्यसपछि अर्को भिडियो आउँछ । त्यो भिडियोमा उनले नेपालका कम्युनिष्टहरु लु’टेरा भएको दावी गरेका छन् । देशको अवस्था देखेर अन्र्तवार्तामा नै उनी ध’रध’री रो’एका छन् ।
देशको अवस्था सुधार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १००० पल्ट भेट्ने कोसिस गर्दापनि आफूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले सूर्य थापा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएर प्रधानमन्त्रीको फोन बोक्नु नै दु’र्भाग्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
मुलुकमा ठूलो संकटमा आउँदै भन्दै उनले चेतवानी दिएका छन् । उनले बेलायतमा मेडिकल डाक्टर अध्ययन गरेको त्यहाँ रहँदा नेपाल आमाको माटो सीसीमा लगेर त्यही सिरानीमा हालेर सुतेको दावी गरेका छन् । देशको अति नै माया लागेर नै आफू मिडियामा आएको उनको दावी छ ।